သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ Archives | ananda
ရန်ကုန် – မြန်မာ၊ မေလ ၂၅၊ ၂၀၁၉။ ananda ၏ တစ်နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် နေ့ကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ၁၂လတာကာလကို ပြန်လည်သုံးသပ်မိပါသည်။ စတင် ရောင်းချချိန်မှာ တမူထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်များနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ တွင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင်သာမက မန္တလေးမြို့တွင်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော အစီအစဉ်များကိုလည်း ယူဆောင်လာ ပေးခဲ့ပါသည်။ ananda သည် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင် ၁၀ဝ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ပြီး မြန်မာနိ်ုင်ငံတွင် တိုးတက် လာနေသည့် စားသုံးသူကဏ္ဍ နှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍတို့တွင် မာတီမီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ananda ကို ဈေးကွက်ထဲတွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး နေ့စဉ်လို အပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနေ ပြည်သူများအတွက် ပေးနိုင်ရန် အစဉ်မပြတ် ကြိုးပမ်းလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိ ပါသည်။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွင် အမြဲတမ်း ထိပ်ဆုံးမှ ရှိနိုင်ရန်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ပထဆုံးတီထွင်မှုအဖြစ် မန္တလေးမြို့တွင် small cell ကွန်ယက်ကို အောင်မြင်စွာ စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနည်းပညာသည် ကွန်ယက်ဖြန့်ကျက်မှုကို လမ်းတစ်လမ်းချင်းစီ အထိ ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန် မြန်ဆန်သော အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ananda မှ ဒုတိယနှစ် သက်တမ်းကို ဝင်ရောက်လာသည့်အလျှောက် ပိုမိုကောငး်မွန်သော ကွန်ယက်ဖြန့်ကျက်မှု၊ အတန်ဆုံးသော ဈေးနှုန်း၊ အကောင်းဆုံးသော စက်များ ဖြင့် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည့်းပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကြိုးစားလျှက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့ရှိ သုံးစွဲသူများ အတွက် နေ့စဉ်နေထိုင်မှုတွင် အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှု ပေးနိုင်ရန် နည်းလမ်းအသစ်များကိုလည်း ကျန်ရှိနေသော ၂၀၁၉ တွင်သာမက ၂၀၂၀ခုနှစ်ထိပါ ချဲ့ထွင်ဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ananda မှ သုံးစွဲသူများ၊ မိတ်ဖက်များနှင့် ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို အဖက်ဖက်မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုအတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ananda သည် အိမ်သုံး နှင့် ရုံးလုပ်ငန်းများအတွက်သာမက မိမိသွားလိုသည့် နေရာများသို့ အလွယ်တကူ ယူဆောင်အသုံးပြုနိုင်သည့် ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသွားမည် ုဖြစ်ပါသည်။ “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ လူတွေရဲ့မတူညီတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ပံ့ပိုးပေးနိ်ုင်ဖို့ နဲ့ feature မျိုးစုံ ပါဝင် တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဖန်တီးသွားဖို့လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ananda ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုကို အပြည့်အဝ မြှင့်တင်နိုင်ရန် မာတီမီဒီယာဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ နှင့် အင်တာနက် နည်းပညာအခြေခံ ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုလည်း ananda သုံးစွဲသူများအတွက် ယူဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ananda ရဲ့ တစ်နှစ်တာခရီးမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု စီအီးအို Alan Sinfield မှပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ### Amara Communications Co., Ltd အကြောင်း Amara Communications Co., Ltd. (ACS) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် telecommunications ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ဦးဆောင်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ananda (အနန္တ) ကို ACS မှ ပိုင်ဆိုင်ကာ လုပ်ငန်းကို လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ananda (အနန္တ) သည် တစ်ဦးချင်း၊ လုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့လိုက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်သောအတွေ့အကြုံများကို ခံစားရ ရှိစေနိုင်မည့် 4G+ ဒေတာ အော်ပရေတာ (4G+ data-only operator) အဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒုတိယ သုံးလပတ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဝန်ဆောင်မှုများ စတင်ပေးခဲ့ပြီး ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ မန္တလေးမြို့တွင် ဝန်ဆောင် မှုများ ပေးဆောင်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ananda (အနန္တ) သည် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အပြည့်အဝ ပိုင်ဆိုင်သည့် မြန်မာ့ဒစ်ဂျစ်တယ် လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံ၏ အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော telecommunications ဈေးကွက်ကို ခြေလှမ်းအစပြုနိုင်ရန် ၂၀၁၁
28th မေ 2019
YANGON, Myanmar – February 20, 2019 – ananda has announced today that its head office moved to No. 114, Kabar Aye Pagoda Road, Sayarsan Ward, Bahan Township, Yangon, Myanmar (Location Map: Link). The new head office is easily accessible by public transportation and is bound to become one of the fastest growing companies in Yangon’s second business hub. The new head office occupiesa8-story building and, in line with human resources rapid growth forecasts, it will be able to accommodate an increase in staff in the coming years. AsaMyanmar home-grown company, ananda is committed to not only provide the people of Yangon and Mandalay with the fastest data-service but also its employees withamodern and inspiring working environment. ananda has also announced the closure of its store at the former head office on No. 520/A, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township since 15th February 2019. Sales and marketing continues at all ananda stores, retail outlets and distribution partners city-wide. Customers can also contact ananda through phone (+959969 787 878), email ([email protected]), website, the ananda Facebook page, the Viber public account and live chat through my ananda app. About Amara Communications Amara Communications Co., Ltd. (ACS) isaleading provider of services to the telecommunications industry in Myanmar. ACS owns and operates ananda,a4G+ data operator that enablesaliberating digital experience for consumers and enterprise users. Launched in Yangon in Q2 2018 and in Mandalay in January 2019, ananda is proud to be
20th ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2019
ananda အင်တာနက်ဒေတာဝန်ဆောင်မှုက မန္တလေးကို စမတ်စီးတီး အဖြစ် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာရန် ပံ့ပိုးပေးသွားမည်။ ရန်ကုန်၊ ၁၀ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်။ ။ မြန်မာ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လောကကို ပြောင်းလဲပုံဖော်ပေးနိုင်သူ ananda (အနန္တ) နှင့် Wave Money တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ 4G+ အင်တာနက်အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့် ငွေပေးချေမှုကို လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစွာနှင့် လွယ်လင့်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် မိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါင်းမှုကြောင့် ananda (အနန္တ) သုံးစွဲသူများသည် မိမိတို့ ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုသည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပလန်များကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင်ရှိသော Wave Money ဆိုင်များနှင့် Wave Money အက်ပလီကေးရှင်းတို့မှတဆင့် လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ငွေဖြည့်နိုင်ကြတော့မည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ရှိ နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပသော ယနေ့အကျိုးတူပူးပေါင်းမှု လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ananda (အနန္တ) ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Alan Sinfield က “Wave Money ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတွင် အားလုံးပါဝင်မှုအတွက် တွန်းအားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ထုတ်ကုန်တွေဟာ အွန်လိုင်းကနေ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်ပြုလုပ်မှု (online shopping)၊ ငွေလွှဲပြောင်းမှု (money transfer)၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကဏ္ဍပိုင်း ဝန်ဆောင်မှု (digital services) စတာတွေကို ရိုးစင်း၊ လွယ်ကူ၊ မြန်ဆန်၊ စိတ်ချရစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အင်တာနက်ကို ပေးစွမ်းပြီး သုံးစွဲသူတွေကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘဝပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဖက်ပါတနာဖြစ်တဲ့ Wave Money နဲ့အတူ နောက်ထပ် ခြေတစ်လှမ်းဆက်တိုးသွားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုမိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူရာ၌ ငွေသားသုံးစရာမလိုဘဲ ငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်နိုင်စေရန်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် ဆန်းသစ်မှုများကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် Wave Money ၏ ရည်မှန်းချက်ထဲမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ “Wave Money နဲ့ ananda (အနန္တ) တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ခြင်းက တူညီတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင် ကူးပြောင်းရာမှာ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ကူညီနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပါ။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ Wave Money ဟာ ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ အခြားသော အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အွန်လိုင်းကနေတဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေသူတွေ၊ တယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်းကုမ္ပဏီတွေ၊ ဘဏ်တွေရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ သူတို့ရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်ထားတဲ့ ထုတ်ကုန်အသစ်တွေ၊ အသစ်သစ်သော တီထွင်ဖန်တီးထားမှုတွေကို အဆင်ပြေလွယ်ကူအောင် အွန်လိုင်းကနေ ငွေပေးချေနိုင်တဲ့ ပလက်ဖောင်းလေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားတာပါ။ ananda (အနန္တ) လို နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမျိုးကို ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကို ထောက်ပံ့ ပေးခြင်းအားဖြင့် မျှတတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးတွင်အားလုံးပါဝင်မှုနဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင် ကူးပြောင်းမှုရည်မှန်းချက်ကို ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်ရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု Wave Money ၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Brad Jones မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ Wave Money သည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် အောင်မြင်မှုများကိုရရှိနေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Wave Money ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသည့် အသုံးပြုသူဦးရေမှာ ၄ သန်းကျော်နှင့် အေးဂျင့်ပေါင်း ၃၄၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ Wave Money သည် မြန်မာ့ဈေးကွက်ထဲသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်ကျော်ကာလမှစတင်၍ ၎င်း၏ ကြီးထွားတိုးတက်လာမှုသည် ဘဏ်များ၏ ဘဏ်ခွဲများဖွင့်လှစ်နိုင်မှု၊ ATM စက်များ ထားရှိနိုင်မှုနှုန်းထားထက် များစွာကျော်လွန်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်ကာလအတွင်းတွင်ပင် Wave Money သည် ဝင်ငွေ ၁၂၃၅% နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပမာဏ ၂၇၆၅% တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ananda (အနန္တ) သည် အရည်အသွေးမြင့်၊ မြန်နှုန်းမြင့် 4G+ ဒေတာဝန်ဆောင်မှုကို တစ်ဦးချင်းသုံးစွဲသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်း လိုက်အသုံးပြုသူများကို ထောက်ပံ့ပေးစွမ်းလျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ananda (အနန္တ)
10th ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2019
ငွေစက္ကူသုံးရန်မလိုသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်သည့် ongo နှင့် ananda ပူးပေါင်းမှုက သုံးစွဲသူများ၏ စစ်မှန်သော ဒစ်ဂျစ်တယ် ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေး။ ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုကဏ္ဍ၌ ဈေးကွက် တွင်ဦးဆောင်နေသူ ongo နှင့် မြန်နှုန်းမြင့် 4G+ ဒေတာအော်ပရေတာ ananda တို့သည် ယနေ့ Pan Pacific ဟိုတယ်ရန်ကုန်တွင် မိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းကြောင်း နှစ်ဦးသဘောတူလတ်မှတ်ရေးထိုးသည့် အခမ်းအနား ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ ပါသည်။ ထိုသို့မိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းမှုသည် ananda သုံးစွဲသူများ၏ မိမိအင်တာနက်အကောင့်များကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ongo အေးဂျင့်ဆိုင်များတွင်လည်းကောင်း၊ Ongo အက်ပလီကေးရှင်း၊ my ananda အက်ပလီကေးရှင်းတို့မှ လည်းကောင်း လွယ်ကူစွာ ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်စေသည်သာမက ongo အေးဂျင့်ဆိုင်များတွင် ananda ၏ ထုတ်ကုန်များကိုပါ လွယ်လင့်တကူ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ “ananda က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက်အခြေခံအဆောက်အအုံကို ပိုပြီးခိုင်မာအားကောင်းလာစေဖို့ မြန်မာပြည် သူတွေလိုအပ်တဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် 4G+ ဒေတာဝန်ဆောင်မှုတွေပေးပြီး ကူညီပံ့ပိုးနေတဲ့နည်းတူ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လည်း ဒီအခန်းကဏ္ဍမှာလဲ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကနေ ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာပါ။ ဈေးကွက်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ B2B ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ongo ဟာ ananda သုံးစွဲသူတွေကို လွယ်ကူအဆင်ပြေပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုကို နေရာမရွေး လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလို ဗျူဟာကျကျ မိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းလိုက်မှုက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေးကဏ္ဍမှာ အားလုံး ပါဝင်လာနိုင်အောင် လမ်းခင်းပေးလိုက်သလို ဖြစ်စေပြီး မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို လည်း မြှင့်တင်ပေးရာရောက်ပါတယ်” ဟု ongo ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Allen Gilstrap မှ ဆိုသည်။ မကြာခင်ကာလတွင် ongo အေးဂျင့်ဆိုင်များ၌ ananda ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူရရှိ နိုင်တော့မည့်အပြင် ongo နှင့် ananda သုံးစွဲသူအသစ်များအတွက် ကုမ္ပဏီ ၂ ခုစလုံး ပူးတွဲ၍ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်မှုများကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ongo ၏ မိုဘိုင်းငွေပေးချေသည့် ဝန်ဆောင်မှုက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသူများနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံးစွဲသူများကို ၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်း အက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုက်ဆံအိတ်ကို ရယူသုံးစွဲနိုင်စေသည်။ ongo သည် မြန်မာနိုင်ငံကိုငွေစက္ကူမလိုသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ် ခုဖြစ်လာစေရန် အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွင် ရှေ့ဆုံးမှနေ၍ ဦးဆောင်လမ်းပြနေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ B2B ဝန်ဆောင်မှုတွင် FMCG၊ အသေးစားငွေကြေးလုပ်ငန်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများကို ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းဖြင့် ငွေပေးချေသည့် ဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်ကာ မကြာသေးခင်ကလည်း ongo သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဖြင့် လစာငွေပေးချေသည့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စတင်မိတ်ဆက်ပေး ခဲ့သည်။ “မြန်မာနိုင်ငံက ငွေစက္ကူမလိုတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍကို ဦးတည်လျှောက်လှမ်းနေတာပါ။ ongo ဟာ သူ့ရဲ့ဆန်းသစ် တီထွင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးမှာ လူထုအားလုံးပါဝင်လာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးနေ တဲ့ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ongo နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ananda ဟာ မြန်မာပြည် သူတွေကို ပိုမိုပြည့်စုံစွာနေထိုင်နိုင်စေဖို့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး စည်ပင်ဝပြောတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိစေဖို့ ဖန်တီးပေးချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ချင်းတူညီကြပါတယ်” ဟု ananda ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Alan Sinfield က လတ်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ Ongo သည် လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့ကြီး ၅၅ မြို့တွင် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဖြန့်ကြက်ထားပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် တစ်ဦးခြင်း ongo ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုကြသူများအတွက် ၎င်း၏ ငွေပေးချေမှုပုံစံများကို ချဲ့ထွင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ အထူးသဖြင့် ananda 4G+ အင်တာနက်ကို သုံးစွဲကြသော ongo အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍများအတွက် ပေးဆောင် စရာရှိသည်များကို ongo အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ပေးဆောင်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ananda သည်
19th ဒီဇင်ဘာ 2018
ရန်ကုန် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ။ ။ ၆ နှစ်ပြည့်၊ ၅ ကြိမ်မြောက်ကျင်းပသည့် MEMORY! International Film Heritage Festival တွင် ချာလီချက်ပလင်၏ ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်သော The Gold Rush ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ananda (အနန္တ) မှ တင်ဆက်ပြသသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် နွေးထွေးသော၊ ပျော်ရွှင်မြူးတူးဖွယ်ကောင်းသော ညနေခင်းအချိန်ကာ လလေးမှ ရုပ်ရှင်ချစ်သူပရိသတ်များကို စောင့်ကြိုလျက်ရှိသည်။ ပရိသတ်အများအပြား၏ သဘောကျနှစ်ခြိုက်စွာ ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးခြင်းကို ခံရသော အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံတွင် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၌ ပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါရုပ်ရှင်ပွဲတော်သည် under the stars with movie stars ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်သည်။ MEMORY ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ၏ လဟာပြင်၌ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်မှ ၁၂ ထိ အခမဲ့ပြသပေးသွားမည့် အပြင် ရုပ်ရှင်မပြသမီနှင့် ပြသနေစဉ် ananda (အနန္တ) ၏ infinity hub တွင် ရုပ်ရှင်နှင့် သက်ဆိုင်သော ဂိမ်းအစီ အစဉ်များနှင့် အလန်းစား 4G+ ဒေတာကို စမ်းသပ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးများကို ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်များအတွက် ဖန်တီးပေးထားပါသည်။ ချာလီချက်ပလင်၏ အကောင်းဆုံးလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သော The Gold Rush ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် ၁၉၂၅ ခုနှစ် တွင် အောင်မြင်မှုအများအပြားကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည့် ဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွင် ချက်ပလင်ကို Little Tramp အနေဖြင့် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထူးခြားလှပသည့် ကကွက်များကိုလည်း ရှုမြင်ခံစားကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ “ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေဟာ ချာလီချက်ပလင်ရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့်လိုက်ရင် နှစ်သက် သဘောကျပြီး ထပ်ခါထပ်ခါကြည့်ချင်ကြလိမ့်မယ်လု့ိ ကျွန်မပြောရဲပါတယ်။ Gold Rush ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ လူတိုင်း ကြည့်ဖူးသင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ ananda (အနန္တ) ရုပ်ရှင်ညလေးကို ဝမ်းသာ ကြည်နူးစွာနဲ့ ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ananda (အနန္တ) ၏ Branding and Communications ခေါင်းဆောင် မဆုမြတ်နိုးမှ ဆိုသည်။ MEMORY ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း ၆၀ ကို ၁၀ ရက်ကြာပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ယခုရုပ်ရှင် ပွဲတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြသသော ခမ်းနားကြီးကျယ်သည့် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကာ အာရှတွင်လည်း ထူးခြားသည့်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ဂန္ထဝင်ဇာတ်ကားများနှင့် ခေတ်ပေါ်ဇာတ်ကား များကို ယှဉ်တွဲပြသပေးသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်များသည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၏ ခေတ်အခြေအနေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ananda (အနန္တ) သည် ၁ ဂစ်ဂါဘိုက်ကို ၆၇၀ ကျပ်၊ ၇ Mbps အထိ မြန်သော အမြန်နှုန်းများနှင့် ဈေးကွက်ထဲတွင် အကောင်းဆုံး၊ အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းလျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်တွင် မေလ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၌ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော ananda (အနန္တ) သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့၌ ၎င်း၏ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်မိတ်ဆက် ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://www.facebook.com/anandalivemore/ သို့ ဝင်ရောက်ကြည့် ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ ### Amara Communications Co., Ltd အကြောင်း Amara Communications Co., Ltd. (ACS) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် telecommunications ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ဦးဆောင်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ananda (အနန္တ) ကို ACS မှ ပိုင်ဆိုင်ကာ လုပ်ငန်းကို လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ananda (အနန္တ) သည် တစ်ဦးချင်း၊ လုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့လိုက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်သောအတွေ့အကြုံများကို ခံစားရ ရှိစေနိုင်မည့် 4G+ ဒေတာ အော်ပရေတာ (4G+ data-only operator)
10th နိုဝင်ဘာ 2018
18th အောက်တိုဘာ 2018